Apple Kubhadhara ichave muIsrael pakupera kwegore neIsracard | Ndinobva mac
Apple Pay ichave iri muIsrael pakupera kwegore neIsracard
Chikuva cheApple chekubhadhara chinowanikwa munyika zhinji pasirese uye kusvika pakupera kwegore rino, zvinotarisirwa kujoina iyi huru runyorwa, Israel. Zvinotaridza kuti Apple eyagadzirira kuburuka munyika kubva paruoko rweumwe wevanonyanya kukosha vanopa, Isracard. Kunyangwe makwikwi ari kutogadzirira zvekuti haisiyo yega kambani yekupa sevhisi iyi.
Ndinofanira kubvuma izvozvo Apple Pay Icho chimwe cheakanakisa "zvigadzirwa" zvandati ndawedzera kumararamiro angu. Chaizvoizvo, ndechimwe cheanonyanya kubatsira mabasa uye andinoshandisa zvakanyanya muzuva rangu zuva nezuva. Kunyanya kubva munaKurume wegore rino izvo zvandinoedza kunzvenga kubhadhara nemari. Kwese kwandinoenda, ndinoburitsa iyo iPhone uye pasina kubata iyo terminal ndinobhadhara zvandatenga. Inonyanya kubatsira kunyanya neApple Watch. Ini handichagoni kufungidzira zuva rangu zuva nezuva pasina kuita uku.
Neichi chikonzero, ndinofara kuziva kuti nyika dzatinogona kushandisa Apple Pay dziri kuwedzera mazuva ese. Kubva pakupera kwegore rino, Israeri ichajoinha runyorwa rurefu rwenyika dzainotoshanda. Iwe uchazviita kuburikidza neimwe yeakakura ekubhadhara makadhi vanopa. Isracard Boka rave richishanda kweanopfuura makore makumi mana uye imomo inoburitsa makadhi eAmerican Express, MasterCard uye Visa, pamwe neayo Isracard brand. Isracard vatengi muIsrael parizvino vanoshandisa anopfuura mamirioni mana makadhi, uye anopfuura makambani zviuru zana anoagamuchira.
Haizovi yega. Iwo makambani Max neICC vari zvakare muhurukuro neApple, vamwe vari padanho repamberi. Saka hazvishamise kuti mukati memwedzi mishoma tinoona makambani maviri aya achivhura yavo Apple Pay sarudzo zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » Apple Pay ichave iri muIsrael pakupera kwegore neIsracard
Carbon Copy Cloner ine zvinoenderana nenyaya ne macOS Big Sur
SuitCase yeMacBook, bhegi rakasviba-shoma kune yako laptop